YC-170 Wire Cutter Panda Cookies Machine Production Line mpanamboatra sy orinasa | Yucheng
YC-170 Wire cutter panda cookies Cookie andalana famokarana masinina dia ampiasaina amin'ny cookies samihafa, toy ny cookies panda, cookie endrika, cookie cookie mitsiky, cookie 9 toradroa, sns.
YC-170 Wire Cutter Panda Cookies Machine Production Line dia biskooty panda mofomamy mofomamy encrusting machine izay miasa miaraka amin'ny fitaovana fanapahana tariby izay afaka manamboatra cookies marobe kokoa toy ny cookies panda, cookies Penguin, cookies mofomamy, cookies mosaic, cookies mofomamy sns. Azonao atao koa ny mampiasa an'io milina io mba hanaovana baolina angovo, baoritra proteinina, baolina daty, baolina voanjo, maamoul, kebbeh, coxinha, bara misy voankazo, croquette, gilasy mochi ary cookies isan-karazany ...
Ny milina mofomamy mandeha ho azy dia afaka manova ny hatevin'ny hoditra, ny halavany, ny haben'ny cookies misy famenoana na tsy famenoana. fanadiovana; Ny lanjan'ny vokatra, ny habeny ary ny refy famenoana casing dia azo ahitsy ho fangatahana mora foana; Multifuncational mba hamokarana karazan-tsakafo samihafa amin'ny fanovana lasitra tsotra fotsiny; Ireo singa marika vita amin'ny china na nafarana.
Azo ampiasaina ihany koa ny milina mofomamy fanapahana tariby hanaovana cookies isan-karazany:
cookies roa sosona, mosaic cookies / cookies , sns.
Ity dia milina famenoana multi-functional, afaka manao biscuits, mofomamy sôkôla, cookies mofomamy ary karazan-tsakafo mihoatra ny 100. Mba hanaovana cookies hafa dia mila manova ny lasitra fotsiny ianao, izay azo namboarina ihany koa.
Endri-javatra amin'ny milina:
Ny milina Encrusting mandeha ho azy dia afaka manova ny hatevin'ny hoditra, ny halavany, ny haben'ny sakafo. Ny milina encrusting mandeha ho azy dia afaka manova bobongolo isan-karazany amin'ny fanaovana vokatra sakafo samihafa miovaova.
Ny milina encrusting mandeha ho azy koa dia afaka manamboatra mofomamy feno / feno toy ny Kubba (kibbeh), Falafel, mooncake, maamoul, mofomamy mananasy, mochi, mochi glace, hena hena, baolina angovo, mofomamy fenoina, bara voankazo, bôkôlà, sns. (sakafo samihafa amin'ny fitaovana samihafa). Ny famenoana dia mety ho Jam, sôkôla, mochi, mochi gilasy, paty tsaramaso, hena voatoto, paty mifangaro voanjo kely (sesame, katsaka, voanjo), sns.
Ny milina encrusting automatique koa dia afaka manamboatra ireto sakafo eto ambany ireto:
mofomamy, mofomamy mamy, mofomamy vita amin'ny malemy, mofomamy, mofomamy hena, biscuits tambun, rocmia, sns.
Teo aloha: Orinasa mandeha amin'ny indostria mampiasa milina fanaovana dumpling ravioli
Manaraka: YC-168 Machine Proteinina mandeha ho azy
milina mofomamy panda
masinina cookies fanapahana tariby